VA vs IPS vs TN: shaashadee u fiican kombuyuutarkaaga? | Golaha Moobaylka
Paco L Gutierrez | | Isbarbardhiga, Internet
Waxaa jira noocyo badan oo guddi ah oo kormeerahayaga ah oo mid kasta oo iyaga ka mid ah loogu talagalay adeegsi iyo nuxur gaar ah, in kastoo aan u adeegsan karno midkoodna adeegsi kasta. Haddii aan dooneyno inaan sida ugu fiican uga faa'iideysanno kormeerahayaga, waxaa ugu wanaagsan in la helo tiknoolajiyadda sida ugu habboon ugu habboon isticmaalka aan siinno aaladdayada. Waxaa jira shaashado, farsamadooda awgood, oo ku habboon in la ciyaaro, laakiin aan ugu fiicnayn qorista ama qaabeynta, midkoodna sababtoo ah heerka cusbooneysiinta, midabada ama xaglaha daawashada.
Sidee iyo waxa lagu nadiifiyo shaashadda kombiyuutarka
Saddexda nooc ee ugu caansan ee aan ka helno suuqa waa VA, IPS iyo TN. Guddiyada aan si weyn isu ekaanaynin, maadaama mid waliba uu ka dhex muuqdo qayb ka mid ah tan kale uu ku liito, marka waxaan u baahanahay inaan si dhow u eegno astaamahooda si aan u go'aansanno midka noogu habboon. Noocyada noocan ah, waxaa jira noocyo kala duwan sida waqtiga jawaabta, xaglaha daawashada, midabka midabka ama softiweerka isku dhafan. Maqaalkan waxaan ku dooneynaa inaan wax ku fududeyno si helitaanka midka kuugu habboon uu kuugu sahlanaado.
1 Sidee ayay teknoolojiyaddani u kala duwan yihiin?
2 Guddiyada IPS
3 Qalabka VA
4 Qalabka TN
Sidee ayay teknoolojiyaddani u kala duwan yihiin?
Tiknoolajiyada guddi kasta waxay leedahay faa iidooyinkeeda iyo qasaarooyinkeeda marka loo barbardhigo kan kale, waxaan ku soo koobi doonnaa dhowr sadar oo mid ka mid ah tiknoolajiyaddu ay ka muuqato midda kale, in kasta oo markaa ka dib aan si faahfaahsan ugu sii socon doonno waxa tiknoolajiyad waliba ku saleysan tahay iyo astaamaheeda oo faahfaahsan. .
IPS: Midabada macquul ah inta badan ma sida caadiga ah ugu soo jiidashada badan oo waa highlight reer IPS darfahoodii, sidaas daraaddeed iyagu waa ugu habboon ee wax ka beddelka sawirka. Sidoo kale u istaag xagalkooda aragtida, oo bixisa aragti qumman dhinac kasta oo laga arko. Waxa ugu xun shaki la’aan waqtiga jawaabta, in kastoo aan horeyba u arki karno gudiyada IPS oo leh waqti jawaab celin ah 1ms.
Tag: El tallaabo dhexdhexaad ah oo ka socota LCD-da caadiga ah ee OLED. VA waa nooc ka mid ah guddi in lumiyaa xaglaha aragtida iyo xaqiiqda midabka marka loo eego IPS, laakiin faa'iidooyinka ka soo horjeedka iyo waqtiga jawaab celinta, Waa wax iska caadi in aad caanka u ah sida Samsung ama Sony. Inta badan TV-yada Samsung ee QLED-dhamaadka sare leh waxay leeyihiin noocaan tiknoolajiyad hogaamineed.
FN: Shaki la'aan nooca ugu da'da weyn ee guddi farsamada LCD. Waxay u taagan tahay gaar ahaan waqtiga jawaabteeda, laakiin beddelkeeda waxaan haysannaa qaar midabo aad u dhexdhexaad ah marka la barbar dhigo labada IPS iyo VA, bixiya codad aad u aamusan, uma taagna qeexitaankeeda muuqaal midkoodna. Kormeerayaashani badanaa waa kuwa ay doorteen xirfadlayaal ciyaartoy fiidiyoow ah, halkaas oo waqtiga jawaabta iyo hertz ay ka adkaadaan wax kasta oo kale.
Shaki la'aan farsamada ugu isticmaalka badan uguna caansan ee isu dheelitirka dhibcaha togan iyo kuwa taban. IPS waxay u taagan tahay beddelaadda diyaaradda, wuxuu adeegsadaa danab sida qaybaha kale ee LCD si uu isugu waafajiyo kiristaalo dareeraha ah oo ka kooban gudigiisa, kuna kala duwan jihada iyo booska. Xaaladdan oo kale kristantarradu waxay la siman yihiin muraayadda muraayadda markaa magacooda (diyaaradda waa la beddelay).
Kristantarrada dareeraha ah ee kumbuyuutarrada IPS uma wareegaan sida ku dhacda kuwa kale, maaddaama kuwan horay loo rogay oo u oggolaanaya iftiinka inuu dhex maro. Tan macnaheedu waxa weeye in IPS-ka ay ka faa'iideystaan ​​xaglo daawasho wacan laakiin sidoo kale in loo baahan yahay iftiin aad u xoog badan, oo keena mararka qaarkood iftiinka iftiinka oo aad u dhib badan.
Soo saaraha badanaa sameeya kan ugu fiican uguna fiican IPS waa LG iyo maanta waxaan ka heli karnaa telefishino tayo sare leh oo ka faa'iideystay tiknoolajiyadan. Shaki la'aan haddii aan dooneyno guddi la isku halleyn karo oo sanado badan IPS waa ikhtiyaar fantastik ah. Haddii aad rabto kormeeraha sawirka iyo fiidiyowga, oo leh IPS waxaan hubineynaa midabbo aad ugu dhow xaqiiqda.
Xirmooyinka VA, shaki la'aan kuwa LCD-yada kuwaas oo badankood u eg OLED marka la eego isbarbardhiga. Gaabinta VA macnaheedu waa Isbaanish: in lays toosan. Marka kristantarradaada dareeraha ahi waxay si toos ah isugu toosan yihiin oo u janjeeraan marka korantada la adeegsado si iftiinka loogu oggolaado sida sawirku dardar gelinayo.
Tiknoolajiyada VA waxaa si ballaaran u adeegsada Samsung qaybteeda sare ee QLED. Xirmooyinkaani waxay leeyihiin faa'iidada wax bixinta midabbo aad uga dheregsan IPS-ga iyada oo aan la gaarin farqigaas aan dhammaadka lahayn ee ay bixiyaan alwaaxda 'OLED'. Taas bedelkeeda, waxay luminayaan xagasha daawashada, taas oo ah sababta Samsung ay u sharciyeysay qafisyada qalloocan si ay uga hortagaan cilladan xoogaa.
In kasta oo ay yihiin guddiyo aad u wanaagsan si ay u soo bandhigaan waxyaabo badan oo warbaahin ah iyaga awgood Marka la barbardhigo weyn iyo isticmaalka gaarka ah ee HDR, waa inaan tagnaa kala duwanaanta ugu sareysa sidaa darteedna qaalisan si aan u helno waqti jawaab celin wanaagsan iyo heerar cusbooneysiin wanaagsan. Qeybaha VA-ga ee ka raqiisan waxaan ka heli karnaa dhibaatooyin marka aan maareyno nalalka shaashadda, Samaynta nuurka ma uniform, sababaya dhibaatooyin meelaha hooska marka aynu daawashada filim.
Aynu ku dhammeyno darfaha TN. Ku saabsan yahay tiknoolajiyada ugu da'da weyn marka loo eego LCD-da oo shaki la'aan kan ugu raqiisan suuqa inkasta oo uu ka yaraado isla markaana soo noqnoqdo. Guddiyadan waxay bixiyaan heerka ugufiican ee soo kabashada ee qiimo jaban suuqa, marka lagu daro tan waxaan helnaa waqtiyo jawaab celin ah oo aan awoodi doonno inaan ku aragno inta ka hartay tikniyoolajiyadda LCD.
Astaamaha looxyada TN waxay ka dhigayaan kuwo ku habboon ciyaaraha, labadaba heerka dib-u-cusbooneysiinta ee na tusi doona sawirrada ugu sarreeya ee FPS ee qalabkeennu noo oggolaado, iyo sidoo kale waqti ku habboon oo jawaab celin ah, waqtiga jawaabtani waa dib-u-dhac yar oo ka yimaada marka aan riixno fure ama jiirka illaa aan ka aragno shaashadda, wax naga dhigi kara inaan guuleysano ama aan ciyaarno.
Cillada ugu weyn ee kuleylkaani waa shaki la’aan noocyadooda kala duwan, inta ay ku jiraan alwaaxda VA iyo IPS inta badan waxay leeyihiin 8 ilaa 10 jajab, qaybaha TN waxaan ku aragnaa ugu badnaan 6 jajab oo u tarjumaya 16,7 milyan oo midabWaxay umuuqataa wax badan, laakiin sawir kasta oo aan ku aragno shaashadda wuxuu leeyahay ku dhowaad noocyo midabbo aan dhammaad lahayn. Tani waxay keenaysaa in midabada shaashadda TN ay aad uga aamusan yihiin uguna cawlan yihiin kuwa kale. Haddii faahfaahintaasi aysan muhiim kuu ahayn adiga oo aad rabto inaad u tartanto sida ugu macquulsan ciyaaraha fiidiyowga, waa ikhtiyaarkaaga ugu fiican shaki la'aan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Internet » VA vs IPS vs TN: shaashadee u fiican kombuyuutarkaaga?